‘लुट्न सके लुट’ गीतलाई प्रतिबन्ध लगाउने प्रधानमन्त्रीज्यू आज सिमाना मिचिँदा किन मौन ? -
सुस्वास्थ्यको कामना, तपाइँसँग एकोहोरो बात गर्न मन लाग्यो। कम्युनिस्टले जितेमा देशले कोल्टे फेर्छ भन्थे अहिले त सिमाना पनि फेरिन लागेछ नि ! सीमा सुरक्षाको निम्ति खटिएका हाम्रा दाजुभाइ नेपालमा सुतेर बिहान भारतमा ब्यूँझने त छँदै थियो, अब केहि समयमा बिहारबाट सगरमाथा देखियो भनेर सगरमाथा पनि भारतकै हो भन्लान् रे, सिङ्गो नेपाल नै नक्सामा हालेर ’ Great India’ भनेर नक्सा बनाईदेलान् रे, लुट्न सके लुट गीतलाई ब्यान गर्ने तपाइँहरु आज जमिन लुटिँदा किन मौन ? भारतको नीति चाम्रो भएको बेला तपाईंहरुको नीति राम्रो हुन पर्ने होईन र ? कि जनताको स्वास्थ्यको ख्याल गर्दै कालापानी लैजा भारत हामी ‘सफापानी’ पिउँछौ भन्ने बिचारमा हुनुहुन्छ ?
मलाई pm बनाइ देउ, मन्त्री बनाइ देउ, मेरो छोरालाई डाक्टर पढाइ देउ, नातिलाई ca बनाई देउ भन्दै भारतीय नेता समक्ष भन्न सके जसरी “सिमाना नमिच “ भन्न तपाईहरुले कहिले सिक्ने ? सेनालाई ब्यारेकमा राखेर पुलिसलाई सिमामा खटाउने ? स्वाधीनतालाई कुटनीतिले नभई राजनीतिले कहिलेसम्म चलाउने ? उसको सिमाना बचाउन हामी नै लड्नु पर्ने, अनि उस्ले यता हामीलाई हेपेर दादागिरी देखाउँदा चैँ तपाईको कानलाई किन कानाबन्धि लाग्यो? कि भनिदिनुस् हाम्रो आर्मीको काम भनेको सडक बनाउने, शिवरात्रीमा टुंडिखेलमा खेला देखाऊने , राष्ट्रपतिको bag बोक्ने मात्र हो , सिमामा त PUBG को आर्मी खटाउनुस् भनेर..
नेपालको आधिकारिक नक्शा कुन हो ? भारतले मिचेको हो कि तपाईहरुले छोडेको ? यत्ति भन्न चाहान्छु, फलाम तातेकै बेला घन हान्ने हो सरकार , रेल र पानीजहाज बिस्तारै चढौंला बरु नेपालको सिमानामा काँडेतार लगाइयोस्, पैसो छैन भने जनता दिन तयार छन् । यस्ता बिषयहरू बिपक्षमा हुँदा मात्र मुद्दा बन्ने सत्तामा पुगेपछि वास्ता नगर्ने प्रवृति सच्याउनुस्, हामी जनता नाकाबन्दीमा जस्तै जवाफ दिन तयार छाैँ, एक भएर, नझुकेर, हस्त नमस्कार ।
(दिपा सिम्खडाको फेसबुकबाट)